Snow-white ukumamatheka - kungcono ukubukeka hhayi kuphela ezikhangayo, ukuzethemba, kodwa futhi ukusebenza evamile isimiso sokugaya ukudla bungene. On isidingo ukuvakashela udokotela wamazinyo kabili ngonyaka ngisho bazi abafundi abasebasha, kodwa abadala abaningi silahle evakashele umtholampilo nje izinkinga zamazinyo ningabi ezibucayi. Namuhla siyazi kancane mayelana enamathela sokwenziwa. Kuyini lokhu? Lowo enconyiwe? Indlela okunokwethenjelwa?
Zamazinyo sokwenziwa enamathela
Namuhla odokotela bamazinyo kufanele arsenal olukhulu okuyiwa kabusha amazinyo. I lokufakelwa kwezitho enamathela bangamalungu esikhiphekayo okuyinto ukuvala izinyo izimpande, ayatholakala kule ngalo ingaphakathi ngomlomo, noma izimila isivele ifakiwe. Yingakho bebizwa luthi alufane. lokufakelwa kwezitho okunjalo njengamanje ethandwa kakhulu, ngoba ngokuphephile abethela futhi uphumule, ngesikhathi ukuhlafuna. Ukusetshenziswa lolu hlobo sokwenziwa okuboniswe kulezi zimo ezilandelayo:
by ukungabi esinqunyiwe noma ephelele namazinyo;
uma kunesidingo, kokukhipha ingxenye coronal we ngezinyo;
ukusula izicubu kanzima.
In the engekho ephelele samazinyo nolwelwesi sokwenziwa isethi enamathela. Kuyadingeka, isiqiniseko, odokotela bamazinyo eziningi ochwepheshe. Esimileni okuhlala ezingaphezu kuka namazinyo zemvelo. Ulungise sokwenziwa ku amazinyo akhe redistributes umthwalo kubo, kanjalo kunciphise ukuphila kwabo.
Lolu hlobo sokwenziwa enezinto eziningi Izimo:
kwehle igazi ekunqandeni;
semithambo nesifo senhliziyo;
Lokunameka sokwenziwa: onjani design?
Izakhi esemqoka yalolu hlobo lokufakelwa kwezitho kukhona uhlelo telescopic nge ukukhiya okunamathiselwe impande, okuyinto libe izingxenye ezimbili - patricians futhi-matrix (ingxenye engaphandle). Ingxenye enzima okunamathiselwe, ngokuvamile exhunywe sokwenziwa esikhiphekayo. Ngalesi esikhundleni engenziwa ngaphandle kokwenza ukulungiswa isakhiwo sonke.
Izinzuzo nezingozi nebubi umgwengwezi we sokwenziwa
Izinzuzo lo mkhiqizo zihlanganisa:
kungenzeka yoma lwezinkalo alveolar (avame kumayelana umhlathi ongezansi);
umsebenzi obusebenzayo okusezingeni eliphezulu;
ingcindezi kancane on the mucosa;
I nemibi lokunameka Ochwepheshe wokufakelwa neziguli kubhekwe ukuba zibiza nokuba yinkimbinkimbi nokugcina nabo isimo esihle sokusebenza (esimweni lapho ogibele amazinyo abo siqu).
Lokho okwakudingeka ukuze kukhokhwe lokufakelwa kwezitho enamathela
enamathela Okugcwele le sokwenziwa intengo zazo ingahluka kakhulu kuye izinto kanye nenani umsebenzi, hhayi injabulo ezishibhile. Acrylic sokwenziwa engabiza ruble 11 000, nolwelwesi - ruble 17 000, futhi badinga okungenani ezimbili, okungcono uma kungaba ezine. Intengo kuhlanganisa intengo ukulungisa sivala, okwenza isikhunta, nokunye. D. Ngakho-ke, isiguli kumele akulungele ukungena ruble ayizigidi 30-40.
Namuhla, siye described you enamathela sokwenziwa esincane. Akukhona nje kuphela nenkinga ngenxa yobuhle, usuvele ukuqonda. Ngenxa yalesi sizathu, ungafaki off Ukuvakashela udokotela wamazinyo.
Izimo Ekhona yefilakisi imbewu
Incwadi "Kungani amanye amazwe acebile nabanye abampofu. Umsuka amandla, ukuchuma nobumpofu ", Daron Acemoglu futhi Dzheyms Robinson. Izincwadi ku ezomnotho
Non-utshwala isifo okunamafutha isibindi (NAFLD): izimbangela, izimpawu, izimpawu kanye nokwelashwa